Muvhuro, Nyamavhuvhu 3, 2020
Ayurveda, hunyanzvi hwekurarama zvinoenderana nemirairo yechisikigo
Ayurveda, ruzivo rwekurarama maererano nemitemo yezvakasikwa
Ayurveda yakaumbwa nemashoko maviri: Ayur, upenyu muSanskrit, uye veda izvo zvinoreva zivo. Kunze kwehutano hwehutano, nzira yekurapa uye hupenyu huri unhu hwechokwadi hwekurarama maererano nemitemo yezvisikwa, iwe pachako, vamwe uye nyika inotitenderedza . Utano hwakanaka, joie de vivre, mufaro, utano hunoratidzika zvakasikwa.
Mhedzisiro yeAyurveda inodzokera kumashure eHarappean emipata yeIndus, 5000 av. JC. Kubvira pamazuva kusvika kuVa Sumerian vezuva ranhasi reIraq, uye vafanotangira kuvaEgipita. Maguta akadai seLothal, ganda guru reIndus, kana kuti Mohenjo-Daro rakange rava kusvika ku 400 000 vagari uye rakanga ratova nemvura inoyerera uye mabhedheni. Aya maguta akavakwa maererano nemitemo yeVastu Shastra, iyo yekuongorora cosmic uye telluric simba, zvakaenzana neFeng Shui kana geobiology. Iyi inobudirira inoratidzirwa nerunyararo rwayo nerunyararo uye isiri-chisimba, archaeologists haana kubudisa zvombo kana zvimwe zvinhu zvakabatana. Zvinyorwa zvekare zvekare zvinoratidza yogis dzakakombwa nemhuka.
Dhanvantari, huMwari hwakabatana neAyurveda nderamwari weVishnu, uye akaremekedzwa navanhu kuti vadzorere hupenyu hwehutano.
Nhoroondo yacho inotaura nezvevarume vatsvene, vaRishis, avo vakapedza makore vachifungisisa nekucherechedza zvisikwa uye hupenyu muHimalaya, vangadai vakagamuchira dzidziso dzeAyurveda yeMwari. Inonyanya kuburikidza nemitemo yemuromo kuti idzi dzidziso dzakaparidzwa kuburikidza nemakumi emakore.
Akafanirwa semhizha kana sayenzi yehupenyu, Ayurveda yechechi inoreva maitiro ose ekurapa akaendeswa, akaunganidza uye anoparadzirwa kwemazana emakore muIndia subcontinent. Izvi zvakagadzirirwa muzvikamu zvisere zvinoumba tsika yose yeAyurvedic. MuSanskrit, "Ayur" zvinoreva "Upenyu" uye "Veda" zvinoreva "Chokwadi" kana "Zivo". Asi Ayurveda inorevei ne "upenyu"? Iko, maererano nemaonero e Nyaya / Vaisheshika, kubuda kunobatanidza muviri, pfungwa, pfungwa uye mweya (Charaka, sutra 1: 42). Upenyu ndiko kuwirirana pakati pekuziva, mukati, iyo noumenon uye kunze kwenyika, izvo zvinoshamisa.
Matare masere eAyurveda
Kaya: Internal Medicine
Graha: Metaphysics uye Psychiatry
Shalakya: Ophthalmology uye Otolaryngology (ENT)
Prasuuti: Mukadzi, kuberekwa uye mushure mekuzvarwa
Vrisha: Aphrodisiacs (nzira yekuberekera mwana ane utano)
Panguva yatakanga tichivhima uye tichiunganidza, taive muchibvumirano pamwe nenyika yezvirimwa uye maitiro ezvisikwa. Nzwisiso yedu yekuziva uye ruzivo rwemuviri wedu rwakagadzirwa nenzira yehupenyu inopindirana nezvinhu zvepanyama.
Vamwe vakaramba hupenyu hwemagariro evanhu uye vakasiya basa mumakore akawanda, sezvo mamiriyoni evanhu muIndia vachiri kuita nhasi. Varume nevakadzi ava vakadzidza kuzvirapa pachavo uye vakararama maitiro akashandiswa kuvaka Ayurvedic system mumakumi emakore ari kuuya.
Semuenzaniso, magwaro emasango, kana Aranyakas, anotaura kuti kare kare tisati tava nenguva, musangano wePan Himalayan wakarongeka pakati pevashandi vezvehutano, apo mumwe akakurukura kubuda kwevarume kubva kumasango kusvika kumisha. uye migumisiro ine ngozi kune mugumo wenyika uye kunyange yeimwe mapuraneti eNyika.
Kubva pamitemo yemuromo kune tsika yakanyorwa
Munguva iyi kare chiKristu chisati chavapo, nokupfuuridzirwa ruzivo dzinowanzotsigi- akaita nomuromo pakati maviri complicit zvakakwana uye nopindirana masangano kuti ndiyo hana tenzi uye mboni, saka kuti ukuru uye nderechokwadi nedzidziso anochengetwa kuburikidza nguva. Zivo yedu nhoroondo kunobva parunyoro uye matongo zvakagadzirwa nevanhu, tinoziva zvishoma pamusoro tsika uye Sophistication wevanhu pamberi 2000 makore BC.
Ayurveda yakabuda gare gare se "hurumende", yakagadzirwa shanduko yemuzivo wezvivo uye maitiro zvakaponawo mune mamwe maitiro (mishonga yevanhu, mishonga yeSiddha, mushonga weSanvan). Mishonga yakakwana yezvigadzirisiti yakasara iri kunze kwechinhu chipi nechipi uye ichiri kuumba nhasi maitiro akaisvonaka kwazvo emishonga muIndia. Idzi tsika dzinoita sedzinopfuurirwa pakati pehukuru hweTamil Nadu, veSuddha, asi ani zvake anokwanisa kuwana zvakavanzika zvekuziva kwake anogona kuwana nzira idzi dzekuporesa.
Kusati kwasikwa Sanskrit, tsika uye sciences zvakaparidzirwa muPrkrata, Brahmi kana Pali. Ipapo Sanskrit yakagadzirwa nechinangwa pakusika mutauro apo mashoko anogona ose akasvuura kupinda coherent midzi, apo mutauro vibration kumutsa zvakajeka aida pfungwa nezvimiro uye marongerwo anoponesa nyaya uye determinants kuburikidza declination. Kunyange pashure zvidzidzo vakatanga kuti circumscribed ivhu maplatelet, simbi kana zvidimbu nemakwati, zvakanyorwa cryptic nenzira: shure, chakakanyiwa kana nhetembo.
Iri bhuku hombe reAyurveda rakagadziriswa kuWest
7 nyowani kubva ku € 44,95
5 yakashandiswa kubva € 45,00
Tenga 44,95 €
kubvira pana Nyamavhuvhu 3, 2020 12:29
Iwe wapindura"Ayurveda, hunyanzvi hwekurarama zvinoenderana ..." Maminitsi mashoma apfuura
Source: NaJonathan Léger Raymond
Via: NaJonathan Léger Raymond
ZVINOKOSHA MUZVIMWE CATEGORY
Kumutswa kwePamhepo - Kwemavara (2017)
Idriss Aberkane - Huru huropi hwako!
Afrikhepri Foundation Sur Mazita akanaka eNAfrica kuvana vedu uye zvavanoreva: "Ndokumbirawo mupedzise rondedzero yemazita eAfrica" Jul 30, 11:08
Afrikhepri Foundation Sur Kutanga kwezwi rokuti Africa: "Isu hatisi maAfrica asi maKamite." Jul 30, 09:49
Afrikhepri Foundation Sur Cheneswa imba yako: Kudzvinyirira masimba asina kunaka: "Maitiro ekuchenesa imba yako uye kubvisa zvisina kunaka simba." Jul 30, 09:43